WSD စီးရီး Flow သဲစက် Fast
နေ WSJ စီးရီး Horizontal Inter-အအေးအပြည့်အဝ Function ပုတီးစေ့စက်
WSP စီးရီး Flow Nano ပုတီးစေ့စက် Fast
WSS စီးရီး Horizontal သဲစက်
WST စီးရီး Turbo Nano သဲစက်
WSV စီးရီးဒေါင်လိုက် Inter-အအေး Bipyramid ပုတီးစေ့စက်
WSZ စီးရီး Inter-အေးမြင့်မားထဲမှာပါတဲ့ Horizontal ပုတီးစေ့စက်
DYS စီးရီး Hydraulic သုံးကြိတ်စက်စက်
FYS စီးရီး Hydraulic ငါးကြိတ်စက်စက်
စင်ကာပူဒေါ်လာ / S ကစီးရီးသုံးခုကြိတ်စက်စက်
စတုရန်းမိုင် / JRS စီးရီးသုံးခုကြိတ်စက်စက်
ထူးခြှနျ Precise သုံးကြိတ်စက်စက်
TYS စီးရီး Hydraulic နှစ်ဦးကြိတ်စက်စက်
YS / YSS စီးရီး Hydraulic သုံးကြိတ်စက်စက်
YSP / YSH စီးရီး Hydraulic သုံးကြိတ်စက်စက်
LS / GJD စီးရီးတောင်းကွိစက် / Emulsifier
LXDLH စီးရီး Planetary ပါဝါရောနှော
LXQLF စီးရီး Multi-function ကို Triple Shaft ရောနှော Enhanced
LXQLF စီးရီး Multi-function ကို Triple Shaft ရောနှော
LXXJB စီးရီး Planetary ရောနှော
DSJ / SZJ လိပ်ပြာရောနှော
GFJ စီးရီး High-Speed ​​ကိုအရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားစက်
ကြွေနှစ်ချက် Roll စက်
LHX စီးရီးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း Emulsion Pump
Lab က Scale ကိုသုံးကြိတ်စက်စက်
ချောကလက်, မြေပဲ, walnut, camellia မျိုးစေ့ Guar သွားဖုံးထုတ်ကုန်လိုင်း
အပေါ်ယံပိုင်း / ဆေးဆိုင်ပိုးသတ်ဆေး / ပေါင်းသတ်ဆေးထုတ်ကုန်လိုင်း
အီလက်ထရောနစ် slurry ထုတ်ကုန်လိုင်း
အမြင့်ထဲမှာပါတဲ့စီဘီ (အော့ဖ်ဆက်, ခရမ်းလွန် offset, ပိုးပုံနှိပ်ခြင်း) ထုတ်ကုန်လိုင်း
စားနပ်ရိက္ခာ & ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်
ဆေးရောင်စုံစက္ကူ & ဆိုးဆေး
lithium battery ကို
ဝန်ဆောင်မှု & ဒေါင်းလုပ်
The 23nd China International Paint Exhibition CHINACOAT The 23nd China International Paint Exhibition CHINACOAT will be held at the Guangzhou China import and export Fair complex from 4th to 6th December , 2018, withaprojected area of 85,000 square meters. We hereby sincerely invite you to visi...ဆက်ဖတ်ရန် »
Changzhou Coatings Association Held The Fourth General Meeting On the morning of November 8, 2018, Changzhou Coatings Association’s 2018 annual general meeting was solemnly held in Changzhou City. 94 members of the Association attended the meeting, which was presided over by Lu Ying, the se...ဆက်ဖတ်ရန် »
13 တရုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘက်ထရီတရားမျှတသောရှန်ကျန်းအတွက်မေလ 22 ကနေ 24 အောင်မြင်စွာကျင်းပ
Post ကိုအချိန်: Jun-07-2018
13 တရုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘက်ထရီတရားမျှတသော CIAPS ကစီစဉ်သည်နှင့်ရှိသမျှသောနှစ်နှစ်ကျင်းပဖြစ်ပါတယ်ရှန်ကျန်းတရုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘက်ထရီတရားမျှတသော (CIBF) တွင်မေလ 22 ကနေ 24 အောင်မြင်စွာကျင်းပ။ လောလောဆယ် CIBF အောင်မြင်စွာဆယ်ကြိမ်များအတွက်ကျင်းပလျက်ရှိသည်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်ပုံမှန်ဘက်ထရီဖြစ်ရပ်ဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာ ... ရှိခဲ့ပါတယ် ဆက်ဖတ်ရန် »
Longxin အကူအညီမေလ9ရက်နေ့တွင်နှင့်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းများနှင့်အတူရှိသည် Friendly ချိန်းမှာ "အင်္ကျီကိုစက်မှုလုပ်ငန်း 2018 မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုဖိုရမ်တစ်ခုပေါ်တွင် Novell နည်းပညာ & material" Organize
အချိန် post: နိုင်ပါစေ-03-2018
Longxin Help Organize the “INT’L INNOVATION FORUM ON NOVEL TECHNOLOGY & MATERIALS IN COATINGS INDUSTRY 2018” and Have Friendly Exchange with Domestic and Foreign Enterprises on May9As chief co-organizer, Longxin successfully help organize the “INT’L INNOVATION FORUM ON NOVEL TECHNOLOGY &amp...ဆက်ဖတ်ရန် »
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-15061651688
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-18248826257
E-mail ကို: lisa@hbhj.com
E-mail ကို: jane@hbhj.com
ဖက်စ်: + 86-519-88608716